Ciyaartoyda Qiimaha Faraha Badan Ku Fadhiya Ee Manchester United Oo Tababar Ku Sameeyey Goob Aan La Fileyn (Sawirro) - iftineducation.com
iftineducation.com – Inkastoo ay noqotay kooxdii ugu horreysay ee Britain ah ee faa’iido ahaan hal sanno gudahood u hesha qiimo lacageed dhan 500 milyan oo ginni, Manchester United ayaa sawirro laga soo qaaday iyadoo ciyaartoydeedu ay tababar ku sameynayaan goobta gawaarida lagu baakinto Arbacadii.
Ka hor kulanka caawa ee ay wareegga labaad ee tartanka League Cup ku wajahayaan kooxda Northampton Town, wiilasha tababare Jose Mourinho ayaa tababar ku sameeyey goob aan laga fileyn waana baakinta baabuurta.
Hubanti waxaa ah in aysan halkaas tababar ugu sameyn karin sida xeradooda caanka ah ee AON Training Complex ama Carrington. Xiddigaha Man United ayaa Talaadadii u saftay Northampton waxayna degeen hoteelka Daventry Court Hotel. Waxaana xusid mudan in qolkiiba looga kireeyey 104 ginni.
Bannaanka hoteelkaan ayeyna tababar ku sameeyeen ciyaartoyda Man United muddo 10 daqiiqo ah iyagoo isku diyaarinaya kulanka caawa ay ku wajahayaan kooxda Northampton Town.
Paul Pogba oo xagaagaan 89 milyan oo ginni dib ugula soo laabtay kooxda ka dhisan Old Trafford ayaa ka mid ah xiddigaha uu cadaadisku saaran yahay ka hor kulankaan isla markaana laga filayo inuu keydka kusoo bilowdo kulanka ka dhici doona Sixfields Stadium.
Man United ayaana iskeeneysa kulankaan iyadoo laga adkaaday seddaxdii kulan ee ugu dambeeyey tartamada oo dhan. Halkaan hoose ka daawo sawirrada ciyaartoyda Red Devils oo tababar ku sameeyey baakinta gawaarida.